4 AS dia namporisika hanangana indray ny faharetana sy ny fifaninanana ao Indonezia taorian'ny areti-mifindra COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » 4 AS dia namporisika hanangana indray ny faharetana sy ny fifaninanana ao Indonezia taorian'ny areti-mifindra COVID-19
Ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny Toekarena Famoronana ao Indonezia dia manao fiaraha-miasa amin'ny fanatsarana ny faharetana sy ny fifaninanana mba hamporisihana ny fifohazana ny orinasa taorian'ny tratran'ny valan'aretina COVID-19.
Mba hanatrarana ny tanjona dia namorona fandaharan'asa miompana amin'ny foto-kevitra “4 AS” ny Minisitera: dia ny Kerja KerAS (miasa mafy), CerdAS (miasa marani-tsaina), TuntAS (mahonon-tena), ary IkhlAS (vonona). Manantena ny minisitera fa ho soatoavina fototra ho an’ny fizahantany sy ny indostrian’ny famoronana ny 4 AS hanarenana ny orinasa sy hamelomana ny toekarem-pirenena.
Ity fitsipika "4 AS" ity dia natsangana taorian'ny fiantraikan'ny valan'aretina COVID-19 tamin'ny fizahan-tany sy ny orinasa famoronana manerana ny firenena, izay talohan'ny nametrahan'ny fameperana ara-tsosialy sy ara-toekarena handrefesana ny fihanaky ny viriosy, dia nisy mpizahatany tonga 16.11 tapitrisa tamin'ny taona 2019 ary nihena 75. tamin'ny 4.02 dia niova ho +2020%.
Ny governemanta dia niasa tamin'ny hetsika tamin'ny fizarana famporisihana fanarenana ho an'ny fizahan-tany sy ny indostrian'ny famoronana. Tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2020, ny indostrian'ny fizahantany any Indonezia dia niharan'ny fatiantoka manodidina ny 85 trillion Rupee Indoneziana amin'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany, miaraka amin'ny indostrian'ny hotely sy trano fisakafoanana tombanana ho fatiantoka manodidina ny 70 trillion Indonesia rupiah.
Ny iray amin'ireo fandaharan'asa dia hetsika ho an'ny mpianatra amin'ny sekolim-piantohana Islamika antsoina hoe "Santri Digitalpreneur Indonesia" izay mifantoka amin'ny fanofanana sy fanoroana ny "santri" (mpianatra) mba hianatra fahaiza-manao nomerika ary hampiasa azy io ho renivohitra ho lasa digitalpreneur na hiasa amin'ny famoronana. indostria.